ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာ ကြမ်းပြင်အောက်တွင် သတ္တုတူးဖော်ရန် ကြိုးစားနေကြတဲ့ အကြောင်း - Knowledgeworms
ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာ ကြမ်းပြင်အောက်တွင် သတ္တုတူးဖော်ရန် ကြိုးစားနေကြတဲ့ အကြောင်း
October 1, 2021 October 1, 2021 AuroraLeaveaComment on ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာ ကြမ်းပြင်အောက်တွင် သတ္တုတူးဖော်ရန် ကြိုးစားနေကြတဲ့ အကြောင်း
ပင်လယ်ပြင်အား ကုတ်ခြစ် တူးဆွခြင်း
နီကယ်၊ ကြေးနီ၊ မဂ္ဂနိစ် နှင့် ကိုဗော့ သတ္တုများကို ရရှိနိုင်ရန် ကုမ္ပဏီများစွာဟာ ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာ ကြမ်းပြင်ကို တူးဖော်ရန် အစီအစဉ်များချကာ လုပ်ဆောင်နေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြဿနာကတော့ သမုဒ္ဒရာ ကြမ်းပြင် အောက်ခြေကို တူးဖော်ခြင်းဟာ ထိုဒေသရှိ မည်သည့် ဂေဟစနစ်နှင့် နေထိုင်မှုများကိုမဆို မလွှဲမရှောင်သာ ပျက်စီးစေမှာ ဖြစ်တယ်လို့ The Guardian အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ့အထဲက အများစုကို သိပ္ပံပညာရှင်များပင် မစူးစမ်း မလေ့လာခဲ့ကြပါဘူး။
ဒီလို သတ္တုတူးဖော်မှုဟာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပျက်စီးစေ ပေမယ့် တဖက်မှာလည်း ကမ္ဘာ့ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချနိုင်မယ့် လျှပ်စစ်ကားများနှင့် တိုးမြင့်လာတဲ့ အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းများ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာပါ။
ရေနက် သုတေသန ဖောင်ဒေးရှင်း Nekton ကို တည်ထောင်သူ Oliver Steeds က ” ကျွန်တော်တို့ဟာ နောက် ၁၀ နှစ်အတွင်း သမုဒ္ဒရာကို ပိုစူးစမ်းဖို့ နည်းပညာတွေ ရှိနေပြီ ဖြစ်တယ်” လို့ The Guardian ကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီ သတ္တုတူးဖော်ရေးနည်းပညာဟာ တိုးတက်မှုအတွက် ထူးခြားတဲ့ အခွင့်အလမ်းတခု ဖြစ်ပေမယ့် ရေနက်တူးဖော်ခြင်းက တဆင့် နောက်ထက် စက်မှုလုပ်ငန်းများ တိုးမြင့်လာခြင်းနှင့် ငါးတွေ မျိုးတုန်းလောက်အောင် ဖမ်းယူခြင်းများကဲ့သို့သော ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ကိုယ်စားပြုနေတယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
DeepGreen လို့ခေါ်တဲ့ သတ္တုတူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီ တခုဟာ သမုဒ္ဒရာကြမ်းပြင်အောက်တွင် သတ္တုတူးဖော်မည့် ကုမ္ပဏီများထဲက တခု ဖြစ်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီမှ ဒီလို တူးဖော်မှုမှ လျှပ်စစ်ကား ဘတ္တရီများအတွက် လိုအပ်သည့် သတ္တုများကို ရရှိနိုင်ပြီး ကမ္ဘာဂြိုဟ်အတွက် အခြား သတ္တုတူးဖော်မှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် သက်ရောက်မှု အနည်းဆုံး ရှိမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ထို ကုမ္ပဏီနှင့် အခြား ကုမ္ပဏီများက သမုဒ္ဒရာကြမ်းပြင်အောက်တွင် သတ္တုတူးဖော်ခြင်းဟာ ကမ္ဘာကို ပျက်စီးစေသည့် နည်းလမ်းအားလုံးကို ကျော်လွှားနေသည်ဟု ပြောနေသော်လည်း ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် လျှပ်စစ်ကား ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီများကတောင် ထိုကိစ္စကို ဆန့်ကျင်နေကြပါတယ်။
ရေနက် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ပူးပေါင်းအဖွဲ့၏ ပူးတွဲ တည်ဆောင်သူ Matthew Gianni မှ “DeepGreen ဟာ မှားယွင်းနေတဲ့ ရွေး ချယ် မှုကို ကမ်းလှမ်းနေတာ ဖြစ်တယ်” လို့ The Guardian သတင်းဌာနကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဘတ္ထရီများ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အရင်းအမြစ်များကို လုံခြုံစွာ ထုတ်လုပ်ပြီး လျှပ်စစ်ကားများအတွက် ဖြန့်ဝေနိုင်မယ်ဆိုသည့် မက်လုံးဟာ တကယ်ကို သွားရေကျစရာ တခုပါ။
ဒါပေမယ့် သိပ္ပံပညာရှင်များက သမုဒ္ဒရာ ကြမ်းပြင်အောက်မှ ထို သတ္တုများကို ရယူခြင်း ဟာ နားလည်နိုင်စွမ်း မရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တခု ဖြစ်သည့်အတွက် သက်ရောက်မှုများကို ထိထိရောက်ရောက် စောင့်ကြည့် နိုင်စွမ်းရှိမှာ မဟုတ်သည့်အပြင် စည်းကမ်းများလည်း ထားရှိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါ့အပြင် ကုန်ကျစရိတ်ဟာလည်း အလွန် ကြီးမားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ သမုဒ္ဒရာ တူးဖော်မှု၏ သက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သိပ္ပံပညာရှင်များတွင် အလွန် အရေးကြီးတဲ့ မေးခွန်းအချို့ ရှိပါတယ်” လို့ ကယ်လီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ် ဆန်တာ ဘာဘရာ သုတေသီ Douglas McCauley မှ The Guardian သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါတွေကတော့ “မျိုးသုဉ်းမှုတွေ ဘယ်လောက်တောင် ဖန်တီးနိုင်မှာလဲ? အလွန် ခံနိုင်ရည်အားနည်းတဲ့ ဒီ စနစ်တွေကို ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်လိုမှာလဲ?
ကာဗွန်စုပ်ယူနိုင်မှု စွမ်းရည်ဟာ ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာများအပေါ်မှာ ဘယ်လို သက်ရောက်မှုတွေ ရှိနေတာလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေပါပဲ။
အာကာသသွား တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ်ကြီးများအတွက် နျူကလီးယား တွန်းကန်စနစ် ပင်တဂွန် အလိုရှိနေ
Samsung မှ ဦးနှောက်အချက်အလက်များကို မိုက်ခရိုချစ်ပ်များသို့ copy and paste လုပ်နိုင်ရန် ဖန်တီးနေ
ဉာဏ်ရည်တုနဲ့ ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍ ယုံကြည်ရပါ့မလား
January 13, 2022 January 13, 2022 Aurora